ခရီးထွက်ခြင်း - လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရန် အကောင်းဆုံး အကြံပြုချက်များကား အဘယ်နည်း။ | Bezzia
Susana godoy | 14/01/2022 12:00 | ခရီးသွား
ခရီးတစ်ခုသွားပါ၊ နေရာအသစ်များကိုကြည့်ကာ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အနှစ်သက်ဆုံးအရာများထဲမှ သုံးခုဖြစ်ပြီး လက်တစ်ကမ်းတွင် ရှိနေသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်သည်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် ခရီးထွက်ဖို့ စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင် ပိုက်လိုင်းထဲမှာ ဘာမှမကျန်အောင် ကြိုတင်စီစဉ်ထားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ထိုမှတပါး၊ ငါတို့သည် သင်တို့ကို ထားခဲ့၏။ အကောင်းဆုံးသော အကြံပြုချက်များကို လက်တွေ့အသုံးချနိုင်စေရန်. ကျွန်ုပ်တို့သိထားသော အလွန်အသုံးဝင်သော အကြံပြုချက်များကို အချိန်နှောင်းသွားသည်အထိ အမြဲမပြင်ဆင်ပါနှင့်။ ဒါဆို မင်းအတွက် ငါတို့ စာရင်းလုပ်ထားပြီးပြီ။ အေးအေးဆေးဆေးဖတ်ပြီး ကောင်းကောင်းရေးဖို့ပဲ ကျန်တော့တယ်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်အားလပ်ရက်များ!
1 သင့်ပိုက်ဆံအားလုံးကို တစ်နေရာတည်းတွင် မသယ်ဆောင်ပါနှင့်
2 ပိုနီးစပ်တဲ့နေရာတွေကို သိဖို့ လောင်းကြေးထပ်ပါ။
3 မသွားခင် သုတေသနအချို့လုပ်ပါ။
4 သိမ်းဆည်းလိုပါက လိုက်လျော ညီထွေရှိပါ။
5 ခရီးထွက်ဖို့ အဝတ်အစားအများကြီး မဝတ်ပါနဲ့။
သင့်ပိုက်ဆံအားလုံးကို တစ်နေရာတည်းတွင် မသယ်ဆောင်ပါနှင့်
ခရီးထွက်ဖို့ အသုံးပြုမယ့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးက အရေးမကြီးပါဘူး။ အကောင်းဆုံးကတော့ သင့်ပိုက်ဆံအားလုံးကို တစ်နေရာတည်းမှာ ဘယ်တော့မှ မသယ်သွားပါနဲ့။. မင်းရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာ တစ်ခုခုနဲ့ မင်းရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခု သယ်သွားလို့ရတယ်။ ဤနည်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မထင်မှတ်ထားသော အဖြစ်အပျက်အချို့တွင် အရာအားလုံးဆုံးရှုံးရန် မလိုအပ်ကြောင်း သေချာစေမည်ဖြစ်သည်။ ပိုက်ဆံတွေ ဖြုန်းတီးနေပေမယ့် အများကြီးမသယ်ရဘူးဆိုတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ သင့်မှာ ပိုက်ဆံအများကြီးမရှိပေမယ့် ခရီးစဉ်အတွက် လုံလောက်တဲ့ ကတ်တစ်ခုရှိဖို့ အမြဲအကြံပြုလိုပါတယ်၊ ဒါက သင့်မှာ ဘုံကုန်ကျစရိတ် ဒါမှမဟုတ် ကျန်ငွေစာရင်းတွေ မပါပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်၊ တစ်ခုထက်ပိုရှိဖို့ဆိုတာ အမြဲတမ်းမဖြစ်နိုင်သလို ဒါကလည်း မရှိမဖြစ်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။
ပိုနီးစပ်တဲ့နေရာတွေကို သိဖို့ လောင်းကြေးထပ်ပါ။
ငါတို့ အိပ်မက်ရဲ့ ခရီးက ဘာလဲ ဒါမှမဟုတ် ငါတို့ သွားချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို မေးရင် အဝေးက နာမည်တွေ မက်လိမ့်မယ် ဆိုတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ကောင်းပြီ၊ အဲဒါကို ခဏခဏ ပြောရမယ်။ ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ရာနေရာနှင့် ပိုနီးကပ်နေပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြီးမားသော အံ့အားသင့်မှုများ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။. စူးစမ်းလေ့လာရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် အသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် မြို့များဝန်းရံထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့သည် အထူးသဖြင့် ခရီးသွားနေရာများမဟုတ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းမွန်သောကမ်းလှမ်းမှုများကိုလည်း ရှာဖွေနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် ဤအဝေးကြီးမှ ဝေးရာသို့ ထွက်ခွာသွားပါက၊ ၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ် စူးစမ်းလေ့လာသင့်ပါသည်။ ယခု ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ချောင်းထိပ်တွင် တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် နည်းပညာကို ရရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ဓလေ့ထုံးတမ်းများ၊ ၎င်း၏ အစာအိမ်နှင့် အလည်အပတ် အများဆုံးနေရာများကို ကျွန်ုပ်တို့ သိနိုင်ပါသည်။. ဒါကြောင့် သွားလည်မယ့်အရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စီစဉ်ထားတဲ့ အရာတစ်ခုကို ယူဆောင်လာရတာ မထိခိုက်ပါဘူး။ ဟုတ်တယ်၊ ဟိုရောက်တာနဲ့ ဒီအစီအစဉ်တွေဟာ အခိုက်အတန့်ပေါ် မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အနည်းဆုံးတော့ မြင်ရမယ့် ရှုထောင့်အချို့ကို တွေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
သိမ်းဆည်းလိုပါက လိုက်လျော ညီထွေရှိပါ။
ခရီးသွားတဲ့အခါ နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်က ကုန်ကျစရိတ်သက်သာချင်လို့ပါ။. ကောင်းပြီ၊ သင်သည် ခရီးတစ်ခုတွင် ပိုက်ဆံအများကြီး မသုံးစွဲလိုပါက၊ ယေဘူယျအားဖြင့် ရက်များ သို့မဟုတ် နာရီများအလိုက် လိုက်လျောညီထွေရှိရမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်သည် တိကျသောနေ့ကို ရှာဖွေနေပြီး တနင်္ဂနွေသို့သွားပါက၊ စျေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာမည်ဖြစ်သည်။ အချို့သောနေရာများတွင်လည်း အလားတူဖြစ်တတ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်တွင်ရှိသည့်နေရာများနှင့် နီးစပ်သော သို့မဟုတ် မသိသေးသောနေရာများတွင် လောင်းကစားရန် သင့်အား အကြံပြုထားပြီးဖြစ်သည်။
ခရီးထွက်ဖို့ အဝတ်အစားအများကြီး မဝတ်ပါနဲ့။
အကြောက်ဆုံးအခိုက်အတန့်မှာ ထုပ်ပိုးချိန်ဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ အရာအားလုံးထက် ပိုလိုအပ်နေပုံရပြီး၊ ဒါပေမယ့် တစ်ဝက်ထက်နည်းအောင် သုံးပါတယ်။ ဒီတော့၊ ရာသီပေါ် မူတည်ပြီး အခြေခံအကျီ င်္နဲ့ နေ့အတွက် အရမ်းသက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ ဖိနပ်တွေကို ဝတ်ပါမယ်။ ညဘက်လိုအပ်သောအခြားအရာ၊ အကောင်းဆုံးကတော့ နောက်ပိုင်းမှာ စတိုင်လ်ကို ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ အခြေခံ စိတ်ကူးတွေကို လောင်းကြေးထပ်ပြီး ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေထည့်ရုံနဲ့ ဒုတိယပုံသဏ္ဍန်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အနက်ရောင် ၀တ်စုံ သို့မဟုတ် ဂျင်းဘောင်းဘီ အဖြူ အင်္ကျီနှင့် တစ်ခုခု ဖြစ်တတ်ပါသည်။ အခုဆို ခရီးထွက်ရင် ပျော်ဖို့ပဲကျန်တော့တယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » ခရီးသွား » ခရီးသွားခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးအကြံပြုချက်များ
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်တွေက သင့်ကို စိတ်ချမ်းသာအောင် ကူညီပေးပါတယ်။
Mango အရောင်းတွင် သင်တွေ့ရမည့် အခြေခံအဝတ်များ